सन्दीप लामिछानेमाथि कर छलीमा अनुसन्धान !
कानुन पोष्ट संवाददाता Wednesday, November 13, 2019
नेपालका सर्वाधिक सफल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले करिब ६ करोड रुपैयाँमा भव्य बंगला किनेका छन् । करिब २० वर्षकै उमेरमा आफ्नै कमाईबाट उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा बंगला किनेका हुन् । सन्दीपको यो सफलता निकै लोभलाग्दो छ र सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर, नयाँ बंगला खरिद गरेसँगै उनमाथि समस्या समेत थपिएको छ । उनी करको लफडामा पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उनको आय र करको विवरणमाथि छानबिन थालेको आजको दृष्टि साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।
Home » Articles » लेख/अनुसन्धान » सन्दीप लामिछानेमाथि कर छलीमा अनुसन्धान !
PREVIOUS POST Previous post: प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै
NEXT POST Next post: २०७५ को एलएलबीको भर्ना बल्ल !